Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Oo Shacabka Somaliland ugu hambalyeeyey munaasibadda ciida carafo oo maalinta berri ah ku beegan Insha Allah
Thursday July 30, 2020 - 11:08:19
Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa Shacabka Somaliland ugu hambalyeeyey munaasibadda ciida carafo oo maalinta berri ah ku beegan Insha Allah
Sidoo kalena wuxu Guddoomiyuhu Bulshada ugu baaqay in laga farxiyo dadka danyarta ah iyo Agoomaha si ay dhammaanteen inoola qeybsadaan farxadda Ciida.
dhanka kale wuxu guddoomiyuhu dar-daaran lexejeclo weyn leh u diray dhallinyaradda gawaadhida goboladda dalka u kaxaysata maalmaha Ciida isaga oo uga digay xawaaraha dheer ee gawaadhida lagu kaxeeyo si nafahooda u bad-baadan.
03/08/2020 - 10:18:14
Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa maanta u magacaabay Xoghayayaashan soo socda.
31/07/2020 - 19:15:48
Guddoomiye Cirro oo gurigiisa ku soo booqday Madaxweynihi horre ee Somaliland Mudan' Axmed Maxamed Maxamud Siilanyo
31/07/2020 - 11:05:07
Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro iyo hoggaamiye Xirsi Cali oo maanta Salaadi Ciida kula tukaday xaafadda Daami ee magaaladda hargeysa dadweyne aad u tiro badan
28/07/2020 - 14:27:37
Xog-hayaha Siyaasadda Xisbiga WADDANI Mudane' Eng. C/raxmaan Magan iyo Xog-hayaha Ciyaaraha Xisbiga WADDANI Mudane' Yuusuf Tadhase ayaa maanta xarunta dhexe ee Xisbiga WADDANI ku guddoonsiiyey Kooxda Magan Hiils direyska kubadda lagu ciyaaro.
02/08/2020 - 23:57:07
Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa mar dhaweyd ku booqday Xildhibaan Dheeg Cisbitaalka Hargeysa Internationalka Hospital oo xaalad caafimaad deg deg ah loo dhigay Xildhibaanka Qaybta ICU unit